डेंगुको संक्रमण : कसरी सर्छ ? यस्ता लक्षण र बच्ने उपाय::देश र जनताप्रति समर्पित
डेंगुको संक्रमण : कसरी सर्छ ? यस्ता लक्षण र बच्ने उपाय
पोखरा-डेंगुको संक्रमण देशभर फैलिनेक्रम बढे पनि समयमा नै उपचार गरिए सहज रूपमा निको हुने चिकित्सकले बताएका छन् । डेंगुको प्रकोप एक्कासि बढ्दा सर्वसाधरणमा अत्यधिक त्रास देखिन थालेको छ तर समयमा नै उपचार गरे रोगको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा बच्न सकिने भएकाले त्रास नमान्न र डेंगुको लक्षण देखिना साथ समयमा नै अस्पताल गएर उपचार गर्न चिकित्सकको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘शरीरका जोर्नीहरूको दुखाइ अत्यधिक हुन्छ । ८÷१० दिनसम्म पीडा हुन्छ, धेरैजसो संक्रमित हुने मात्रै हो । तर, आत्तिनुपर्दैन ।’ डा। पुनका अनुसार डेंगु संक्रमण गराउने लामखुट्टे बिहान ९ देखि १२ र दिउँसो ३ देखि ७ को बीचमा मात्रै बढी सक्रिय हुने बताए ।
महिलाहरुले स्तानकाे सुरक्षा कसरी गर्ने ? तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर अशर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ...
यौ’न तृप्ति मेट्न साइबर से’क्स, डरलाग्दा परिणाम हिजोको परिस्थितिमा यौ’न सम्बन्ध असहज थियो। अहिले यौ’न जोडीलाई आफू अनुकूलको यौ’न चाहना पूरा गर्ने माध्यम सहज छ। त्यति मात्रै हैन, यौ’न जोडी नपाएको–नभएको...
गृहमन्त्री थापाका भाइकाे हिरासत ‘चिरायु’ अस्पताल भएपछि …. गृहमन्त्री राम बहादुर थापाका भाइ पक्राउ परेयता उनकाे लागि हिरासत चिरायु अस्पताल भएकाे छ। पक्राउ परेदेखि नै बिरामी भएको भन्दै गृहमन्त्रीका साहिँला भाइ नरेशकुमार...